Itiyoophiyaatti guyyaan 'Jaalalaa' har'a kabajama - BBC News Afaan Oromoo
Itiyoophiyaatti guyyaan 'Jaalalaa' har'a kabajama
1 Fuulbana 2017
Goodayyaa suuraa Ayyaanni kun barkumee Itiyoophiyaa waggaa 10niin booda kabajama
Guyyoonni maqaa garaa garaatiin ayyaaneffamanis har'a ''Guyyaan Jaalalaa'' tiin jalqabameera.
Mootummaan Itiyoophiyaa simannaa bara haaraa 2010 sababeeffachuun sagantaawwan adda addaatiin kabajuuf karoorri baase.
Ayyaanni kunis dhaaddannoo 'Barri dhufu, bara Itiyoophiyaan itti olaantuu dha'' jedhuun kabajama. Hojiilee gaarii mootummaan barkumee booda dalage kan ittiin yaadatamudha jedhaa jirus. Hawaasas ni damaqsa jedhameera.
Jalqabbiin ayyaanoota kanaa jaalalaan taha. Har'a Itiyoophiyaatti ayyaanni Arafaa fi Jaalalaa waliin kabajamu.
Guyyaa har'aatii kaasee haga Qaammee 5 tti mata dureewwan armaan gadiitiin moggaafamaniiru:
Hagayya 26 - Guyyaa Jaalalaa
Hagayya 27 - Guyyaa Haadhoolii
Hagayya 28 - Guyyaa Maanguddootaa
Hagayya 29 - Guyyaa Tokkummaa
Hagayya 30 _ Guyyaa Dubbisaa
Qaammeen 1 - Guyyaa Magariisaa
Qaammeen 2 - Guyyaa Walkabajaa
Qaammeen 3 - Guyyaa Jaalala Biyyaa
Qaammeen 4 - Guyyaa Nageenyaa
Qaammeen 5 - Guyyaa Itiyoophiyaa
Ministeerri Komunikeeshinii Mootummaa Dr. Nagarii Leencoo, guyyoonni kunniin hojii guyyoota muraasaa qofa osoo hin ta'iin, itti fufiinsaan kan aadaa ta'aniidhas jedhaniiru, akka marsaritii Ministeerichaa irratti eerametti.
Itti dabaluunis, ayyaanichi akka Federaalaattis tahe akka naannootti kan kabajamu yommuu ta'u, bara dhufuuf waadaa kan ittiin galludha jedhan.
Haa ta'u malee, namoonni baayyeen 'Jaalala akkamii kabajna?' jechaa jiru.
Qaammeen 3 ammoo, 'Jaalala Biyyaaf' moggaafameera.
Barreessitoonni miidiyaalee hawaasaa tokko tokko, kabajni guyyaa kanaa faayidaa akka hin qabne barreessan.
Barsiisaa Yuniivarsiitii Amboo kan tahe, Siyyuum Tashooma, fuula Feesbuukii isaarratti: ''Bilisummaan uummataa, walqixxummaafi haqni hakabajamu'' kan jedhe, Shororkeessaa jedhamee yogguu dararamu, 'Guyyaa Jaalalaa' kabajuun haqarratti qoosuudha.'' jedheera.
Pirezidaantichi daawwannaa Qellemiin hojii eegalan
Mariin dhimma hariiroo Oromoo fi Amaaraa Ambootti taa'amuuf
Jaalalli aangoo gaggeesitoota Afrikaa hanga heera jijjiiruutti
Sagantaa gaggeessaa Obbo Lammaa Magarsaa irratti maaltu jedhame?